Nhau - Ungasarudza sei pepper grinder maitiro uye kugona
Mhiripiri inogona kunzi inguva yakakosha mumidziyo yakawanda. Kana iwe uine chinobatsira pepper grinder, iwe unogona nyore kushandisa chitsva pasi pepper kuwedzera flavour kune yako ndiro. Nzira yekusarudza akasiyana maumbirwo uye kugona?
Chimiro cheiyo grinder grinder
1. Chinyorwa chinokanganisa mhando
Vanhu vanoda zvekubika vanonyatsoda mutsindo kana mhiripiri yakaiswa pasi nayo, uye hwema hwunouya nahwo. Iyo inyanzvi kushandisa! Nekudaro, irwo rudzi rwechigaya chemhiripiri chinganetse kutenderera nekuda kwekusiyana mukugadzirwa kana saizi. Kana maoko achitsvedza kana kuti akazora mafuta panguva yekubika, zvinowedzerawo kuoma kwekushanda nekuda kwekutsvedza;
2. Imwe-ruoko rwekudzvinyirira mhando
Inonyanya kushandiswa nekutsikirira zvibato pamativi ese erutivi rwekumusoro, kana kudzvanya mabhatani; inogona kushandiswa neruoko rumwe, iri nyore kwazvo. Panguva imwecheteyo, kune akawanda anonakidza masitaera ekusarudza kubva. Zvisinei, iyo mari inogona kukuyiwa panguva inowanzo kuve diki, uye inokodzera kuti ishandiswe patafura sechikafu cheparutivi ichienzaniswa nekicheni inoda kuwanda yakawanda.
3. Rudzi rwemagetsi
Ingo mhanyisa switch yekumhanyisa mhanya mhiripiri, uye inogona kuvhiyiwa neruoko rumwe. Iyo mhando-yekuchengetedza-uye inomhanya mhando. Hunhu hwepembe mhodzi yezviyo yakaenzana kupfuura iyo yemhando yemhando, uye mhiripiri yehupfu haigone kuoneka.
Kureba uye kugona kusarudza
Pamusoro pechimiro, saizi uye kugona kweiyo grinder grinder zvakare ari iwo zvikamu izvo zvinofanirwa kutariswa kutarisisa kana uchitenga.
Kunyanya kune maviri-ruoko rwekuvhiringidza mhando, kana saizi yemhiripiri poto iri diki kwazvo, kubatirira kwekuruboshwe neruoko rwerudyi kwakanyanya padyo uye zvichanetsa kuisa simba. Chaizvoizvo, hurefu hweanosvika gumi nemaviri kana kupfuura hunogona kushanda zvirinyore nevarume nevakadzi, asi kana ikashandiswa nevana, kunyangwe iyo ruoko-rwumwe runogona kunetsa kushanda nekuda kwemusiyano wehukuru. Usakanganwa kutarisa saizi yemushandisi usati watenga, uye wozosarudza maitiro akakodzera.
Uye zvakare, kuti yakawanda sei mhiripiri inogona kukwana muchigayo chakakoshawo. Kana iko kukuya kweguyo kwakanyanya, kuisa mhiripiri yakawandisa panguva asi kusiri kushandiswa mukati menguva yakati kuti kunogona kukonzera mhiripiri kurasikirwa nekunhuwirira kwayo usati waikuya nekuishandisa. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kuti iwe uise chete huwandu hwepepper iyo inogona kushandiswa mukati memwedzi mumwe kusvika kumitatu, wedzera kuwanda kwekuwedzera kuti uchengetedze kunhuhwirira, uye chengeta mapepercercorns asara munzvimbo inotonhorera. Panguva imwecheteyo, icho chinokuya mhiripiri chinofanira kuchengetwa kure nenzvimbo dzinodziya zvakanyanya senge chitofu chegasi chaiyo kuti zvidzivise kuwora kwezviyo zvepepuru.